Dosage Usage: Wet the pet hair with warm water, takeaproper amount of the bath and evenly rub it on the pet in the hand. It can be rinsed with water for about 3-5 minutes, or diluted 5-20 ကြိမ်.
Dog: Yorkshire terrier, golden retriever, Afghanistan, Old English sheepdog long-haired dog, စသည်တို့.
မေး：PAN ANGEL စီးရီး စုတ်တံမပါသော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အခြောက်ခံစက်?
က：NBF သည် အတွေ့အကြုံရှိ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် သန့်စင်ရေး ထုတ်ကုန်များအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ 12 NBF သည် အတွေ့အကြုံရှိ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် သန့်စင်ရေး ထုတ်ကုန်များအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။. NBF သည် အတွေ့အကြုံရှိ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် သန့်စင်ရေး ထုတ်ကုန်များအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။.
က: ပုံမှန်အားဖြင့် 5-20 ရက်ပေါင်း.
က：ပေးဆောင် 50% ပထမ ဦး ဆုံးအပ်နှံနှင့်ကျန်ရှိသောပေးဆောင် 50% တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ.
က：Our MOQ is 48pcs.
က：လိပ်စာ:စတုတ္ထထပ်，အဆောက်အအုံ No.3，Yadi နည်းပညာပန်းခြံ，အမှတ် ၄ Hetai လမ်း，Helong လမ်း，Baiyun ခရိုင်，ကွမ်ကျိုး，တရုတ်
Celine ဝမ်တယ်: +86 189 2407 0859 အီးမေးလ်: angel@nbf.hk